RW Ciraaq Haydar Al-abadi oo kula taliyay ISIS in ay isa-soo-dhiibaan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldRW Ciraaq Haydar Al-abadi oo kula taliyay ISIS in ay isa-soo-dhiibaan
November 1, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Raysulwasaaraha dalka Ciraaq Haydar Al-abadi. [Sawirka:AP]
Baqdaad-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dalka Ciraaq Haydar Al-abadi ayaa kula taliyay kooxda Dowlada Islaamiga ah sidoo kale loo yaqaan ISIS in ay isku soo dhiibaan ciidamada dowladda oo ku sii siqaya magaalada ay ku xooganayaaeen kooxda ISIS dalka Ciraaq ee Mowsil.
Haydar Al-abadi oo taleefishinka dowladda kasoo muuqday ayaa yiri: “Ma haystaan doorasho aan ka ahayn in ay isa soo dhiibaan ama in ay dhintaan.”
Ciidamada dowlada Ciraaq ayaa hadda qiyaastii hal kiiloomitir u jira duleedka cirifka bari ee magaalada Mowsil waxayna isku diyaarinayaan in ay galaan.
Cutubyo kale oo ciidamo ah ayaa dhanka koonfurta kaga soo siqaya magaalada Mowsil.
RW Al-abadi ayaa yiri: “Waxaan ku dhownahay dhammaan fariisimihii ISIS ilaahay idankiisna waxaanu maska ka jari doonaa madaxa. Wado kale ma haystaan mana jirto wado furan oo ah in ay baxsadaan.”
Mr Al-abadi ayaa ah sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Ciraaq.
February 13, 2017 Ugu yaraan 11 qof oo lagu dilay weerar isbiimayn ah oo lala eegtay dad banaanbax sameynayay gudaha magaalada Lahore ee Pakistan
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan hal qof oo shacab ah ayaa ku dhintay afar kale oo ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya ahna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii miinada dhulka lagu aaso lala beegsaday gaari ay ciidamada [...]